Ra’iisul Wasaaraha iyo Saraakiisha Ammaanka oo maanta laga sugayo Baarlamaanka – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaaraha iyo Saraakiisha Ammaanka oo maanta laga sugayo Baarlamaanka
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka oo maalinimadii shalay kulan gaar ah ku yeesheen xarunta Golaha Shacabka ayaa ku go’aamiyay in Ra’iisul Wasaaraha iyo Saraakiisha Amniga ay hor-yimaadaan maanta oo Arbaco ah, si su’aalo looga weydiiyo arrimaha Amniga.
Kulankan Xildhibaanada ayaa ka dambeeyay markii shalay Taliyeyaasha Nabadsugida iyo Booliska ay hor-imaan waayeen, inkastoo Wasiirka Amniga uu hor-tagay, hadana markii ay soo xaadiri waayeen Labada Taliye ayaa la fasaxay Wasiirka.
Xildhibaan Maxamed C/llaahi Xasan oo ka mid ah Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga Baarlamaanka ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha iyo Taliyeyaasha Amniga ay wax ka weydiin doonaan xaaladaha amni ee dalka, gaar ahaan tan Muqdisho oo faraha ka sii baxaya.
Waxaa uu sheegay in amniga Muqdisho uu ku soo aruuray kaliya Wadada Maka Al-Mukarama, ayna lagama maarmaan tahay in Laamaha amniga la xisaabtamaan, maadaama dhibka jira uu yahay hogaan xumo sida uu yiri.
Inkastoo Taliyaha Booliska uu safar ugu maqan yahay dalka Tunisia, ayaa hadana la ogeyn in Ra’iisul Wasaaraha uu hor-tagayo iyo in kale, iyadoo maalmahan Baarlamaanka uu aad diirada u saarayay arrimaha amniga, iyadoo ajandayaashii ee hor-yaalay meel iska dhigay.
Dagaal u dhaxeeya Ahlusuna iyo sarkaal horay ugu biiray oo ka socda Dhuusa Mareeb